Dalka Giriiga oo loo dheereeyey muddada amaahda Midowga Yurub siiyo - Wargane News
Home Somali News Dalka Giriiga oo loo dheereeyey muddada amaahda Midowga Yurub siiyo
Dalka Giriiga oo loo dheereeyey muddada amaahda Midowga Yurub siiyo
Dalka Giriiga iyo madaxda Midowga Yurub ayaa habeenimadii xalay ee Jimacada heshiis ku gaarey in waqtiga barnaamijka amaahda loo dheereeyo dalka Giriiga. Heshiiskan ayaa su’aalo badan jawaabahoodu ay yihiin kuwo banaan oo furan, waxaana ay si wanaagsan u kala caddaan maalmaha soo socda.
Wasiirada Maaliyadda ee Midowga Yurub ayaa shirkii ay yeesheen maalintii Jimcada ku heshiiyey barnaamijka amaahda ee Giriiga in loo dheereeyomuddad laguna daro afar bilood oo keliya. Xukuumadda cusub ee shuuciga ah dalka Giriiga ayaa codsatey lix bilood in loo dheereeyo.
Wasiirka Maaliyadda ee dalka Holland Jeroen Dijsselbloem oo dalkiisu hadda hayo madaxtinimada wareegta ee Midowga Yurub ayaa sheegay in uu ku qanacsan yahay heshiiska, Waxaana heshiiskan muujinayaa talaabadii u horeysey ee dib loogu dhisaayo is aaminka Giriiga iyo Midowga Yurub.
Maalmaha Sabtida iyo Axadda aya dalka Giriigu soo bandhigayaan wixii ay ka bedalayaan barnaamijkii hore. Xukuumadda cusub ee Giriiga ayaa sheegtey in aysan waxba ka badleyn isbeddelkii hore ee ahaa 30% dib u habeynta bixinta kharajiyaadka Dowladda in ay sidiisi u qaadanayso.
Wasiirka Maaliyadda ee dalka Giriiga Yanis Varoufakis ayaa sheegey in heshiiskaani uu ahaa in meel dhexe la isugu yimaado dalkiisuna uu ku qanacsan yahay.
Dalka Giriiga ayaa ka mid ah 19 dal oo isticmaala lacagta EURO ee Midowga Yurub oo hadda ka kooban 28 dal, Dalka Giriiga ayaa burbur dhaqaale ku habsadey tan iyo sanadkii 2009, waxaana Midowga Yurub ku khasbanaadey in ay badbaadiyaan, maadaama saameyn weyn ay ku leedahay lacagta EURO iyo shirkadaha Midowga Yurub ee maalgashtey Giriiga.